NANG KYAR OO (နန်းကြာဦး): June 2011
မနေ့လည်း ဒီအတိုင်း ဒီနေ့လည်း ဒီအတိုင်း အရင် ရက်တွေကလည်း ဒီအတိုင်းပဲဆိုတာ ...
စီးထားတဲ့ ဖိနပ်ကလေးကလေးကို ဘာရယ်မဟုတ်ငုံ့ကြည့်မိတော့ ... တော်တော်ပါးနေပြီပဲ
ပါးယုံတင်မကပါဘူး .... ဖနောင့်ဖက်ပိုင်းဆို ပါးလွန်းလို့ပေါက်တောင်နေပြီ ...... အင်း ဒီနှစ်စပိုင်းကတည်းက တော်တော်ခရီးရောက်ခဲ့တာပဲလေ...
မေးပါများခရီးရောက် သွားပါများဖိနပ်ပေါက်ဆိုတာ ဒါပေါ့.. အဟင်း
ကိုယ်ဖာသာကိုယ် ရေရွတ်ရင်း တယောက်တည်းပင် ပြုံးလိုက်မိသည်။
ခရီးကလည်း အများကြီးရောက်ခဲ့ပါတယ်။ ရောက်တဲ့ခရီးတိုင်းမှာလည်း "အသက်ကြီးနေပြီ" " အားကိုသုံးပြီးဘာတွေလုပ်နိုင်မှာလဲ" "ဒီမှာလူငယ်တွေပဲခန့်တာ"
"အဆင်မပြေနိုင်ဘူးနော်" "အားနာလိုက်တာ" " နောက်နေ့ပြန်လာကြည့်ပါလားလူကြီးမရှိလို့" " ဒီဲ့ပြင်နေရာသွားကြည့်ဦးနော်" "ဘာနော် ညာနော် နော် နော် "
ဖာသာအမေးနှင့်အတူ နေပူပူကျောပူပူမှာ အရdပ်ထူထူကို မျက်လုံးဝှေ့ကာ ရှာမိသည်။
နဖူးမှ ချွေးစီးအနည်းငယ်ကို လက်နှင့်သပ်ချရင်း ဗန်ဒါပုပြတ်ပြတ်အောက်နားမှာ နေရာယူဖို့ပြင်ဆင်မိသည်..။။
အုံခဲနေသော ပုရွတ်ဆိပ်မဲမဲကြီးများက သူ့ထက်အရင် ရောက်နှင့်နေလေပြီ...အင်အားက သူတို့ဖက်ကများနေပြန်တော့ ကိုယ်ပဲမာန်လျော့ရတော့မလိုပင်...
ကိုယ်ကိုလည်း သူတို့နေရာလုလေမလားဟူသည့်သဘောဖြင့် ကြည့်နေကြသလို...
မတတ်နိုင်ပါ တခရီးတည်းသွားတွေပဲလေ အေးအတူပူအမျှပေါ့နော်....
အပြုံးနှင့်နှုတ်ဆက်လိုက်ပြီး သူတို့နှင့်ခပ်ခွာခွာလောက်တွင် ခြေပစ်လက်ပစ်ကို ထိုင်ချလိုက်မိသည်။
"ဟဲ့ ဘယ်သွားမလို့တုန်း" "ဟိုမှာ" "ဟာ အသားမရှိပါဘူးဆို" "ရှိရှိ မရှိရှိ ကိုက်ချင်တယ် သွားယားနေလို့ " "အော် သနားပါတယ်မလုပ်ပါနဲ့ နေပါစေ ကိုယ့်မှ အန္တရာယ်မပေးတာ"
"ဟုတ်တယ် သားလေးရေ မလုပ်နဲ့နော်"(မှတ်ချက် ။ ။ ပုရွက်ဆိပ်တွေရဲ့စကားသံပါ)
အနားမှာ ရစ်သီရစ်သီ ဟိုပြေးဒီပြေးလုပ်နေကြတဲ့ ပုရွတ်ဆိပ်သေးသေးလေးတွေကို အဓိပါယ်မဲ့ ငေးကြည့်နေ..
မိရင်း အတွေးတွေက ဟိုပြန့်ဒီပြန့်နှင့်....
"ဟင်" နားထဲသို့ စူးဝင်လာသော ကားစက်သံနှင့်အတူ...
ဖြတ်ကနဲလန့်နိုးသလိုဖြစ်သွားမိချိန်မှာ ပတ်ဝန်;ကျင်က အမှောင်ထုကို စတင်လွှမ်းခြုံနေလေပြီ။
"အမလေး ကားတွေမရှိရင်တော့ ပြသာနာပဲ"
ပြန်မယ့်လမ်းကို အလျှင်အမြန်ဦးတည်မိရင်း စိုးရိမ်စိတ်ကလေးလည်းဝင်မိသည်..
"ဒဂုံတောင် ဒဂုံတောင် ၂၀၀ ၂၀၀ "
၅၀ ခရီးလမ်းကို မှောင်နေတဲ့အတွက် ၂၀၀ ပေးရတော့မယ်ဆိုတော့ အိပ်ကပ်ပိန်ပိန်လေးကကို စမ်းရင်း နှမြောစိတ်အပြည့်ဝင်မိသည်။
ဖာသာရေရွတ်မိရင်း.... မတတ်နိုင်သည့်အဆုံး ကိုယ်လိုသူလိုတွေနှင့်အတူ အသက်ကို သတိမထားမိတော့ပဲ အလုအယက်ပြေးတက်မိတော့သည်။
"ကျွတ် ကျွတ် ကျွတ်"
"အင်း သက်သာပါတယ် ကျွတ် ကျွတ် "
အိပ်ယာလေးထက်မှ တရွှေ့ရွှေ့ ဖင်ရွှေ့သွားနေသည့် ဇနီးသည်ကို မေးရင်း လှမ်းလက်စလက်ကလေးကိုကျော်ကာ ကွမ်းအစ်ကလေးအား မိမိအရင်လက်ဦးလိုက်သည်။
"ရော့ ရော့ ဒါယူမှာမို့လား"
"မင်းသွားတာအရေးမကြီးဘူး အေးအေးချမ်းချမ်းသွားဖို့က ဒါလိုနေသေးတယ်လေ" လက်ကလေးကိုကွေးပြလိုက်တော့ ဇနီးသည်သဘောပေါက်သွားပြီထင်..။
"အင်း ဟုတ်ပါတယ် အဲဒါ့ကြောင့် မသွားနိုင်သေးတာပေါ့"
"ရှင်ရော အဆင်ပြေလာရဲ့လား အင်း မေးသာမေးရတာ အဖြေက အရင်နေ့တွေအတိုင်းကော်ပီကူးလာတယ်မှုတ်လား အဟင်း ဟင်း.".. မရယ်ချင့်ရယ်ချင် ရယ်လိုက်မိသည်..။
လူကသာ လေဖြတ်ထားလို့ အိပ်ယာထဲနေတာ စိတ်က ရှင့်နောက်လိုက်နေတာလို့ မပြောပေမဲ့လည်း အိမ်ထောင်ဦးစီးဖြစ်သူသိမှာပါလေ...
"အို ရှင်ကလည်း အားမှန်းမအားမှန်းမသိ ခေါ်မနေပါနဲ့ သူတို့အလုပ်နဲ့ သူတို့ရှုပ်နေမှာဥစ္စာ"
ပြောသာပြောရသည် မျက်နှာကလေးတွေကို အာရုံမှာပုံပေါ်ကြည့်နေမိပုံပင်.. ဟူး..။ နွမ်းလျှနေသောဇနီးမျက်နှာကိုနားလည်မိသလိုကြည့်ရင်း
"ဟော အဖေ ရောက်နေတာကြာပြီလား"
မေ့တေ့တေ့ဖြစ်နေသော စက္ကလှေခေါက်နည်းကို မနည်းပြန်စဉ်စားနေချိန်မှာ သားဖြစ်သူအသံက အကြားအာရုံထဲဝင်လာသည်။
"အေးကွ ဒီမှာမင်းရဲ့သားက လှေလုပ်ပေးပါဆိုလို့ အဟင်း"
"ဟုတ်တယ် အလုပ်က အော်ဒါတွေများနေတာနဲ့ ကျွန်တော်လည်း မနားရပါဘူး"
ရော့ မိန်းမရေ သိမ်းလိုက်ဦး"
အနားသို့ရောက်လာသော ချွေးမဖြစ်သူကို လက်ထဲကပိုက်ဆံအိပ်လှမ်းပေးလိုက်တာ မကြည့်ပဲမြင်လိုက်ရသည်။
"အမဲသားနပ်ထားတယ် ပဲရေပွလည်းကြော်လည်းရှိတယ် သရက်သီးလည်း လှီးထားတယ်ကိုကျော်ရေ..".
နောက်ဖေးမှ ချွေးမဖြစ်သူပြန်အော်သံက နားထဲထပ်ဝင်လာသည်။
"အဖေလည်း ပြန်ရင်စောစောပြန်နော် တော်ကြာမှောင်လာဦးမယ် "
သားဖြစ်သူအမေးကို လေးတွဲ့တွဲ့ဖြေရင်း အမေရော နေကောင်းလားဟူသည့်အမေးကို ဖာသာကြားရနိုးနိုးစောင့်စားနေမိသလိုပင်...
"အေး အေး "
"ကဲ အဖေ ကျွန်တော်ထမင်းစားလိုက်ဦးမယ် အဖေရော စားပြီးမှလာတာမှုတ်လား " အမေးနှင့်အဖြေက သူ့ဖာသာပင်..။
ကိုယ့်အဖြေကတော့ ညာတာလား အမှန်လား ဖာသာသိ၏။
"စောစောပြန်အဖေရေ အဖေ့မြေးခိုင်းထားတွေလုပ်နေလို့ တော်ကြာမှောင်သွားရင်ခက်မယ် ကျွန်တော်လည်း ပင်ပန်းနေလို့လိုက်ပို့ပေးနိုင်မှာမဟုတ်ဘူး"
တီးတိုးအဖြေနှင့်သက်ပြင်းမောကိုချကာ ခြေလှမ်းကို တိုက်ခန်းဆီမှရွှေ့လိုက်သည်။
"အော် အဖေ ခဏ"
"မနေ့က အဖေ့သမီးဖုန်းဆက်တယ် အဖေလာရင် အိမ်လွှတ်လိုက်ပါဦးတဲ့ သူတို့လင်မယားဘုရားဖူးသွားမလို့ အဲဒါအိမ်စောင့်မရှိလို့တဲ့"
"အော်" ဆိုသည့်စကားသံက ရင့်ထံဆို့နစ်သွားသလို ခံစားရရင်း လည်ချောင်းထိပ်သို့ထွက်မိသည့်အသံပြာပြာလိုပင်..။...
အပြန်ခြေလှမ်းတွေက အလာတုန်းကလောက် မသွက်လက်တော့ပါ။
"ဘယ်လိုလဲ တွေ့ခဲ့လား" "ကလေးတွေနေကောင်းလား"
"လား" "လား" ဆိုသည့်အမေးတွေ တထပ်ကြီးမေးတော့မည့် လူမမာဇနီးသည်အတွက် မည်သို့ဖြေရမည်ဆိုသည့်အဖြေများကို
အစ်မ တပေါင်းသီ ရဲ့လက်ရာတစ်ခုပါ ။
Posted by Kosai Wanna at 20:15 1 comment:
လက်ရာမြောက်လှ ၍ ချီးကျူးထိုက်လှသော ပန်းချီဆရာလေး.......
ဒီ ကလေးငယ်လေး ကိုကြည့်ပြီး အရမ်းကို ကျွန်တော်ချီးကျူးမိပါတယ် ။ အသက်ငယ်ပေမည့် ပညာမငယ်
တဲ့ ကလေးပါ ။ ဒီကလေးဟာ ကိုယ်တတ်တဲ့ ပညာနဲ့အသက်မွှေးကျောင်းပြုနေတာပါ ။တချို့ ဆို မိဘ ကပညာတွေ သင်ပေးထားတောင် မိဘ ဆီကလက်ဝါးဖြန့် နေတဲ့သူတွေ အများကြီးပါ ။ထိုသူတွေဟာ ဒီကလေးရဲ့ခြေဖျားတောင် မမှီတဲ့ သူတွေပါပဲ ။ ကျွန်တော် ဘလော့ တွေလျှေက်လည်ရင်းနဲ့ Nge Naing ရဲ့ဘလော့ မှာ တင်ထားကိုတွေ့ လို့ ကြည့်မိရင်း သဘောကျလို့တင်လိုက်တာပါ။
ကဲ......သူ့ လက်ရာ ကိုကြည့်ရအောင်ဗျာ...
ဒီကလေး အတွက် ရင်ထဲ မှာရှိတဲ့ အတိုင်း ဖွင့်ထုတ်လိုက်ဗျာ....
Posted by Kosai Wanna at 12:432comments:
Posted by Kosai Wanna at 18:004comments: